သူငယ်ချင်းများအတွက်ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 4, 2008 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင်ကျွန်တော်ပိုက်ဆံပျောက်သွားတယ်ဆိုတာသတိထားမိတဲ့သူတွေအတွက်မှတ်စုတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုမတင်တာတောင်တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်မှာမိသားစုအကြပ်အတည်းအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပြီးကျွန်မရဲ့အာရုံစိုက်မှုနှင့်စွမ်းအင်အားလုံးကိုရယူခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်သည်မည်မျှအရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကိုမည်မျှပင်လေးစားပါစေ၊ မိသားစုကဲ့သို့မည်သည့်အရာကမျှအရေးမကြီးပါ။
ဤခက်ခဲသောကာလများအတွင်းကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းများအတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒီတနင်္ဂနွေမှာငါကအရာရာတိုင်းအဆင်ပြေရဲ့လားလို့မေးခဲ့တယ်။ (ဒါကအဆင်မပြေသေးပေမယ့်အဲဒီကိုရောက်လိမ့်မယ်။ )
သူငယ်ချင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောရလျှင်ဤအရာသည်ငါခဏတာလုပ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသော post ဖြစ်သည်။ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ Bean ကို Fiend, Jason Bean (ဆက်စပ်မှုမရှိပါ) Be ရေးသားချက်ကိုရေးသားခဲ့သည် Douglas Karr's Friend ။
ဂျေဆန်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး ၏အချိန်ကိုက်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သူ၏ကင်မရာကိုချိန်ချိန်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုလှည့်ပတ်သည်ငါ့လက်မောင်းနှင့်အတူအဲဒီမှာရပ်နေတက်လှောင်ပြောင်သူသည်ဓာတ်ပုံကိုယူ။ ထို့နောက်ကျွန်တော် post တစ်ခုလုပ်ရန်နှင့်အခြားသူများကိုဖြည့်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်အကြံအစည်ကိုပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတုန့်ပြန်မှုပါ။
ငါတကယ်တော့ John Uhri ကိုခေါင်းနဲ့ပက်တာမဟုတ်ဘူး။ ငါသူ့ကိုကောင်တာပေါ်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးကင်မရာကဖမ်းလိုက်တယ်။
Lorraine နဲ့သူမခင်ပွန်းတို့ကိုဒေသတွင်းဖြစ်ရပ်များမှာအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ခဲ့ရပြီး၊ ငါတို့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကုမ္ပဏီအတော်လေးပျော်ခဲ့ကြရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပြန်လည်ပေါင်းစည်းထားတဲ့မိသားစုနဲ့ပိုတူတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
Michelle ၏ဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်သော်လည်းသူမသည်သူမ၏စဉ်းစားဟန်နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစကားပြေကိုနှစ်သက်ပြီးဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ Michelle နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကော်ဖီထိုခွက်ကိုရနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်!
ဒေသခံ podcaster နှင့်ဂီတလုပ်ငန်းရှင် extraordinaire၊ Darrin Snider ပင်လုပ်ရပ်အတွက်ရရန်အချိန်ကိုယူ! ငါမှာ Darrin တွေ့ဆုံခဲ့သည် ExactTarget နှင့်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောဆိုမှုပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ မကြာမီလမ်းကြောင်းများထပ်မံကူးယူရန်မျှော်လင့်ပါ။
သင်ဆဲပျော်စရာ၌ရနိုင်! ဒီမှာပါ မူရင်းဓာတ်ပုံ ကိုယ့်ကိုယ်ကို Photoshop လုပ်နိုင်တယ်။ သူငယ်ချင်းများများလေလေ၊
Tags: ဖွင့်လှစ်ခြင်းFTCပုံဆွဲဒီဇိုင်းနာတရားမဝင်သောဥပဒေရေးရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ဖရslideshare အကြံပေးချက်များအမြင်များ
Starbucks - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်တန်ဖိုးကျခြင်း
သြဂုတ် 4, 2008 မှာ 9: 46 AM
ဆိုလိုတာကခန့်မှန်းချက်အရသင်ဟာအဲ့ဒီ့ Google plug-in ကိုမတည်ဆောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာပါဘဲ။ တစ်နေ့တာတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှအရာများသည် ပို၍ ပင်ချောမွေ့မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သငျသညျသော်လည်းလုံးဝကိုမှန်ကန်ပါတယ်, ငါ့မိသားစုထက်ပိုအရေးကြီးသောအရာ။ စိန်ခေါ်မှုကတော့မိသားစုကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်သင်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ မကြာခင် The Bean Cup မှာတွေ့မယ်
4:2008 pm တွင်သြဂုတ်လ 2, 34
ဒီ plugin ကိုငါတည်ဆောက်ချင်သေးတယ်။
ထောက်ခံမှု (နှင့်ချစ်ကြည်ရေး) Jason အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် ဒီည The Bean Cup မှာမင်းကိုတွေ့မယ်။